Madaxweynaha Dowladda Falastiin oo Ku hanjabay inuu Ka bixi doona Heshiisyadii Ay Israa’iil la Galeen | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA CAALAMKA Madaxweynaha Dowladda Falastiin oo Ku hanjabay inuu Ka bixi doona Heshiisyadii Ay...
Madaxweynaha Dowladda Falastiin oo Ku hanjabay inuu Ka bixi doona Heshiisyadii Ay Israa’iil la Galeen
Madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas ayaa ku hanjabay inuu ka baxayo heshiisyadii ay la galeen Isra’iil, haddii uu Benyamiin Netanyahu uu oofiyo balanqaadkiisii ahaa inuu qabsanayo dooxada Jordan iyo Waqooyiga Badda loo yaqaano (Baxrul meyd).
War qoraal ah oo ay baahisay Wakaaladda wararka ee Falastiin, ayaa lagu yiri: Cabaas wuxuu sheegay in heshiisyadii lala galay Israa’iil ay dhici doonaan haddii ay Isra’iil ku soo xad gudubto qeyba horleh oo dhulka Falastiin ka mid ah.
Maxamuud Cabaas ayaa sidokale sheegay in go’aamada Netanyahu ay ka hor imaanayaan go’aamadii lawada galay iyo sharciyada caalamka.
Netanyahu “ma doonayo xalkasta oo nabadda lagu xoojinayo mana aqoonsano in go’aamada Dowladda Falastiin ay wax tar yahiin, wuxuna diidayaa heshiiskii hore ee la wada galay ” ayuu yiri Maxamuud Cabaas.
Xoghayaha Guud ee Guddiga fulinta Ururka Xoreynta Falastiin Saa’ib Curey qaad , ayaa sheegay in aan loo dulqaadan Karin hanjabaada Yahuuda ee ku aadan qabsashada dooxada Jordan iyo waqooyiga Baxrul meyd, talaabadana ay tahay dambi dagaal iyo meelka dhac loo geysatay karaamada Dadka reer Falastiin.
Mas’uul kale tirsan Ururka Xoreynta Falastiin ee PLO oo lagu magacaabo Xanaan Ashraawi ayaa ku tilmaamay hadalka Netanyahu inuu yahay xadgudub dhuleed iyo mid qowmiyadeed oo meesha ka saraya fursadaha nabadda ee horay loo galay.
Ugu danbeeyntii Ururka Xamaas ayaa si wada jir ah uga soo horjeestay hadalka hanjabaada ah eek a soo yeeray Benyamiin Netanyahu ee ku aadan inuu qabsashada dooxada Jordan iyo waqooyiga Baxrul meyd
Previous articleSoomaaliya oo Wareejisay Hoggaanka Shirka Golaha W/A/Dibedda Jaamacadda Carabta
Next articleSoomaaliya oo ka qayb gashay wejiga afaraad ee shirka deyn cafinta.